Nbili nke ihuenyo nke abụọ | Martech Zone
Nbili nke ihuenyo nke abụọ
Sunday, November 4, 2012 Satọdee, Nọvemba 3, 2012 Douglas Karr
Anyị na e dere banyere ọdịnihu nke Egwuregwu Social, ma nke bụ eziokwu bụ na ihuenyo nke abụọ adịlarị ebe a. Na mpụga ịga ihe nkiri, mgbe telivishọn m nọ n'ụlọ, enwere m laptọọpụ, mbadamba nkume ma ọ bụ iPhone m na njikere mgbe niile. A abụọ na ihuenyo bụ eke m… na ọ na-aghọ mainstream onye ọ bụla ọzọ, oke!
Na-agbanwe Mgbasa Ozi telivishọn na ntinye ngwaahịa
Kedu ka nke a si agbanwe etu anyị si azụ ahịa? Ọ dị mma maka otu, ụlọ ọrụ ndị na-akpọsa na telivishọn ga-agbakwunye atụmatụ dị n'ịntanetị. Buildingmepụta ụlọ dị mfe ịchọta peeji ndị dị mfe iji rie na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba dị mkpa. Commercialzụ ahịa gị ekwesịghị inwe akara ngosi akara ngosi Facebook, ọ kwesịrị ịnwe peeji ọdịda nke a na-ama ụma tinye ebe ahụ maka ndị na-ahụ ihe nkiri. Enwere m ike ịtụnye ịnwe ụzọ / tv na saịtị gị site na iji usoro a na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ọfụma na nnukwu mkpụrụedemede na ọtụtụ oghere maka onye ọrụ iji rụọ ọrụ.
Ya ejula gị anya n’ihe dị n’akụkụ nkuku na teknụzụ mkpịsị aka na-ege ntị. Ngwa maka mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba nkume ga-abụ ebe a maara nke ọma n'oge na-adịghị anya mgbe ole ị na-ekiri otu telivishọn ma ọ bụ na-egosi gị azụmahịa. Cheedị ngwa nke na-enye gị njikọta ma na-enye ka ị na-elele… mekọrịta na mbadamba gị ma ị na-ele ndụ ma ọ bụ na-ele ihe ngosi edere edere.
Gbanwee Cognition Ndị Ọrụ na Àgwà Web
Maka ụlọ ọrụ ndị na-anaghị akpọsa ngwa ahịa na telivishọn, ọ pụtara na - karịa mgbe ọ bụla - ọ bụ igodo iji nweta saịtị mkpanaka na nke kachasị mma, ngwa na ibe kachasị mma nke achọtara na nyocha. Ekwenyere m na ihuenyo nke abụọ nwere nnukwu mmetụta na njirimara onye ọrụ ma a bịa n'ịlele ibe weebụ gị. Ndị ọrụ na-eme ọtụtụ ihe, nlebara anya dịkwa ọbụna n'ihu. Ochie abụọ nke abụọ nke ịlele ibe weebụ na ịghọta ihe ọ bụ nwere ike bụrụ na ọ ghagoro n'otu sekọnd.
Iji ngwa ngwa mmekọrịta na akwụkwọ dijitalụ iji nwekwuo oge na saịtị yana mmekọrịta dị mkpa. Nbili nke ihuenyo nke abụọ ga-aga n'ihu ịgbanwe omume onye ọrụ… mee ihe ugbu a!
Tags: akara mkpisi aka ọdịyoihuenyo nke abụọelekọta mmadụ telivishọnelekọta mmadụ tvelekọta mmadụ
Njikọ Akwụkwọ Njikọ Njikọ
Roadzọ Azụmaahịa Oge A
Nov 5, 2012 na 1:04 PM
Echere m na ọ gaghị ewe ogologo oge rue mgbe anyị ga-ahụ TV na Internetntanetị jikọtara ọnụ (otu a ga - eme na ọdụ redio)